Samsung Galaxy S9 သည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်စော။ ရောက်လာနိုင်သည် Androidsis
Samsung Galaxy S9 ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်
အဆိုပါတစ်ခုမှာ စျေးကွက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်ဖုန်းများမှာ Samsung Galaxy S9 ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ၂၀၁၈ တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖုန်းအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် ဖန်တီးထားပြီးကြောင်းမျှော်လင့်ချက် လစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကိရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလတွေဟာရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပေါ်လာလေ့ရှိတယ်။ ၎င်း၏ထင်ဒီဇိုင်းကိုမကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သည်.
နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလသတင်းများကမီဒီယာအမျိုးမျိုးတွင်အားကောင်းလာပြီး Galaxy S9 ၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲကိုဖော်ပြသည်။ The Samsung ၏မူလအစီအစဉ်မှာဖုန်းကိုဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်ပြသရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံကစိတ်ပြောင်းသွားပုံရတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ Galaxy S9 ကိုထုတ်ဖော်ပြမလဲ။
El ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပခဲ့သော MWC သည်တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ များစွာသောအမှတ်တံဆိပ်များသည်ဤဖြစ်ရပ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီး၊ အသစ်အဆန်းများ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းများကိုတင်ဆက်ရန်။ Samsung ကအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေပါ။ သို့သော်ထိုသို့ပုံရသည် 2018 အတွက်အစီအစဉ်များကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်.
ဒါဟာကုမ္ပဏီရဲ့အစီအစဉ်များကိုပုံရသည် သူတို့က Galaxy S9 ကို MWC 2018 မကျင်းပမီကတင်ပြဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာဘယ်လောက်ကြာကြာမှန်းဆတွေပေးနေတယ်ဆိုတာကိုမသေချာဘူး။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကောကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် စက်ကိုဇန်နဝါရီလတွင်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသတင်းကဒီအယူအဆကိုပိုအားကောင်းလာစေတယ်။
သော်လည်းအခြားအသံ သူတို့က Samsung က MWC 2018 မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတခြားအချိန်တွေမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကစက်ကို MWC မစတင်မီတစ်ရက်မှာတင်ပြလိမ့်မည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Galaxy S7 နှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်တစ်ခုခု။
အ မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များက Galaxy S9 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ဒီကိရိယာပတ်ပတ်လည်အလွန်ကြီးစွာသောမျှော်လင့်ချက်၏ဥပမာတစ်ခု။ ထုံးစံအတိုင်း, Samsung ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီကောလာဟလတွေဟုတ်မှန်မမှန်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရ ဦး မယ်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy S9 ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်
၎င်းသည် Xiaomi Mi Mix3အသစ်ဖြစ်နိုင်သည်